HVM Analamanga : Nihaona mivantana tamin’ireo fokontany miisa 192 -
AccueilRaharaham-pirenenaHVM Analamanga : Nihaona mivantana tamin’ireo fokontany miisa 192
Notanterahina omaly, tetsy amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano, ny fivoriana niarahan’ny antoko Hery Vaovaon’i Madagasikara eto Analamanga, na ny HVM Analamanga tamin’ireo sefo fokontany miisa 192 avy amin’ireo boriborintany enina. Fivoriana niavaka mialohan’ny fiatrehana ny fety satria natrehan’ny birao nasionalin’ny antoko HVM, izay notarihin’ny filoha nasionaliny, Rivo Rakotovao.
Tamin’izany indrindra no nanambaran’ny filoha nasionalin’ny HVM, Rivo Rakotovao, fa anisan’ny asa tsy maintsy tanterahina ny fandresen-dahatra ny mpiara-belona. Izany hoe, tsy voatery hitovy firehana ny mpiara-monina, ka izay indrindra no ilàna ny fandresen-dahatra ataon’ireo mpikambana HVM eny ifotony isaky ny fokontany.
Nanipy teny ho an’ireo mpikambana ihany koa ny mpandrindra rezionalin’ny HVM Analamanga, Ndranto Rakotonanahary, ny amin’ny tokony hanarahan’ireo mpikambana eny ifotony ny lisi-pifidianana mba tsy ho very zo izy ireo, satria zo fototra ny fandehanana mifidy, ary adidy masina amin’ny firenena.
Fa ankoatra izay, dia notsindrian’ny filoha nasionalin’ny HVM fa tao anatin’ny fotoana maromaro, manenjika ary manakiana ny governemanta hatrany ireo mpanohitra. Nambarany hatrany fa tsy misy lafy tsarany mihitsy fa dia fanaratsiana tsy misy fiafarany, indrindra fa ny filazana fa efa manao propagandy mialohan’ ny fotoana ny governemanta tamin’ireo fitokanana ny zava-bita tetsy sy teroa. Nohazavainy ary nohitsiany avy hatrany ireo mpanohitra fa ny zava-bita ho an’ny firenena, ho an’ny vahoaka sy ny taranaka no tokanana ary fananam-bahoaka ireny. « Anareo no mandinika sy mieritreritra na manao propagandy izahay na tsia », hoy i Rivo Rakotovao.
Ankoatra izay, dia nohamafisin’ity filoha nasionalin’ny HVM ity fa ny antoko HVM dia manohana hatrany, ary manolotra ny filoha Hery Rajaonarimampianina ho kandida amin’ny fifidianana 2018. “Manohana izahay, ary manolotra ny Filoham-pirenena ho kandida saingy, mbola tsy namaly izany fangatahanay izany ny Filoha Hery Rajaonarimampianina”, hoy hatrany izy.
Nanambara i Rivo Rakotovao fa ny antoko HVM dia manaja ny lalàna velona eto Madagasikara, indrindra mahakasika ny fifidianana izay nohamafisin’izy ireo, araka ny Lalàm-panorenana, tanterahina amin’iny taona 2018 iny ny fifidianana Filoham-pirenena.
“Hojerena manokana ny toerana misy anareo, indrindra izay faritra dibo-drano. Tsy maintsy ataontsika izay ahazoana tombontsoa iombonana eto amin’ity tany sy fanjakana ity”, io no nambaran’i Marc Ravalomanana raha nihaona tamin’ireo mponina anatin’ny fokontany miisa ...Tohiny